Fiber Optic Adapter Vagadziri & vanotengesa - China Fiber Optic Adapter Fekitori
FTTH kutenderera donhwe tambo
Fiber optic splice kuvharwa, ...
Internet optic Kuparadzirwa Bo ...
Fiber optic donhwe waya ne ...
Ftth donhwe waya simbi waya ...
Fiber optic adapters imwe inonzi fiber optic coupler chishandiso chidiki chinoshandiswa mumagetsi e-fiber masisitimu ane imwechete kana yakawanda yekuisa tambo uye imwe kana akati wandei ekuburitsa tambo. Iyo fiber optic adapter inobvumira fiber optic chigamba tambo kuti dzibatanidzwe kune imwe yega imwe kana mune yakakura network, ichibvumira akawanda madivayiri kutaurirana kamwechete. Inonyanya kupararira, inoshandiswa zvakanyanya mu fiber Optical transmission line uye yekupedzisira mamaira ekupedzisira musanganiswa wemushandisi.
Jera Optical fiber adapters inogona kuiswa mumhando dzakasiyana dzeanosangana magetsi kumagumo ese eiyo Optical fiber adapter kuti uone kushandurwa pakati penzvimbo dzakasiyana senge FC, SC, ST, E2000, MPO, MTP, MU uye nezvimwe.
Jear inopa chigadzirwa chakazara chefibre Optical adapters ine yepamusoro, yakagadzikana mhando uye yemakwikwi mutengo. Ndokumbirawo unzwe wakasununguka kuti utaure nesu kuti uwane rumwe ruzivo nezve maadapter.
Fiber optic adapters, Imwe-modhi